Baaqa Amnesty International - BBC News Somali
Baaqa Amnesty International
26 Agoosto 2010
Ururka u dooda xuquuqda bani aadanka Amnesty International ayaa war qoraal ah oo uu ka soo saaray xaaladda collaaded ee Muqdisho wuxuu cambaareyay, weerarada lala eegto shicibka iyo xad gudubyada kale ee lagu hayo dadka aan waxba galabsan.
Waxaa uu weerarkani muujinayaa ayay tiri Amnesty, sida Al Shabaab aanay dan uga lahayn nafta shacabka Soomaaliyeed iyo xuquuqda aasaasiga ah ee caalamiga ah. Al shabaab waxay sheegtay inay weerarrada caynkaas ah la beegsato dowladda laakiin dhab ahaantii waxay weeraraan oo dilaan waa shicib, kuwaas oo ah dad aan si toos ah colaadda ugu lug lahayn. Weerarro toos loogu qaado dadka shicibka waa dembi dagaal ayay tiri Amnesty International.
Image caption Amnesty International
Weerarkii 24kii bishan lagu qaaday hotel Muna oo ku dhow xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, oo ahaa goob ay inta badan degan yihiin xubno ka tirsan Baarlamaanka Somaaliya waxaa ku dhintay 33 qof oo u badnaa dad rayid ah oo ay ku jireen afar xildhibaan, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.
Shan xubnood oo ka mid ah ciidammada ammaanka ayaa sidoo kale la sheegay inay ka mid ahaayeen dadka dhintay.
Labo ama saddex nin oo aad u hubeysan oo ahaa kuwii weerarka soo qaaday oo lebbisnaa dharka ciidanka dowladda ayaa hotel-ka galay kaddib markii ay dileen ilaaladii joogtay halka laga galo, waxayna rasaas ku bilaabeen dadkii gudaha hotel-ka ku jiray, iyagoo furay albaabada qolalka la seexdo xabbadna la beegsaday martidii joogtay, sida ay ku warrameen dadka degaanku. Al shabaab oo ah koox hubeysan oo ka horjeedda dowladda ku meel gaarka ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas.